Axmed Madoobe oo taliyaha nabadsugida maamulkiisa u magacaabay Col, Gaboobe. |
Axmed Madoobe oo taliyaha nabadsugida maamulkiisa u magacaabay Col, Gaboobe.
Hoggaamiyaha maamulka Jubba Axmed Madoobe oo baryahan shirar joogta ah la lahaa saraakiisha ciidankiisa ayaa waxaa uu isbadel ku sameeyey hoggaanka nabadsugida maamulkiisa Kismaayo.
Waxaa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu Col, Gaboobe yahay taliyaha nabadsugida ee maamulka Jubba, isagoona xilka kala wareegay Axmed Ibrahin Niiniile oo xilkaasi sii hayey tan iyo maalintii la dilay Ciise Raaskambooni.
Isbadelka Axmed Madoobe uu sameeyey ayaa timid kadib markii magaalada Kismaayo ay sii korortay ammaan xumada ay la daalaa dhaceyso tan iyo markii ay gacantiisa soo gashay. Waxaana maalinkasta ku geeriyooda shacab iyo askarba.
Dhinaca kale ciidamo laba boqol lagu sheegay oo horey loogu tababaray inay ammaanka Kismaayo sugaan ayaan la ogeyn waxa ay qabtaan. Inkastoo saraakiisha ku talaxtagtay arrimaha ammaanka ay sheegeen inay ciidankaasi laftooda qeyb ka yihiin ammaan xumada Kismaayo.
Lama yaqaan ninkan cusub waxa uu kala duwan doono ragii xilkaasi uga horeeyey oo waxba aan ka qaban hay’adaasi ay ku magacownaayeen.